जस्ता भगवान् उस्तै भक्त | SUZZAN ADHIKARY
जस्ता भगवान् उस्तै भक्त
Author Suzzan Adhikary
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको खबर सर्वविदितै छ । आगामी दिनमा हुने अर्को कुनै भ्रमण वर्ष पनि असफल हुनमा अर्को एक कारण थपिने सम्भावना बढेको छ । कारण हो, चीनीयाँ नागरिकमाथि सिंहदबारअघि शुक्रबार गरिएको लाठीचार्ज । सिहंदरबार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका चीनीयाँ नागरिक नेपाल घुम्न आएका थिए वा अरु कुनै कारणले नेपालमा नै रोकिएका थिए, कारण खुल्न बाँकी नै छ । खैर कारण जे सुकै होस् उनीहरु हिमाल पारीको आफ्नो छिमेकी देशमा पाहुनाका रुपमा थिए । नेपाली सभ्यता अनुसार पाहुनालाई ईश्वरको दर्जा दिनु मानव धर्म अन्तर्गत पर्दछ । तर, आजको घटनालाई आफ्नो घरमा रहेका पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्ने नवीन परम्पराको सुरुवात मान्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा धुँवासरी फैलिएको खबरसँगै पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी गर्नेहरुको पनि लर्को लामै छ । प्रश्नहरु उब्जदै छन्, यदि यहीं घटना चीनमा हुन्थ्यो र नेपाली नागरिक प्रदर्शनकारीको भूमिकामा हुन्थे भने ? पङ्तिकारको नजरमा उत्तर सरल छ, राज्यले आफ्ना नागरिकलाई घाँटी हेरेर हाँड निल्न सिकाउनु पर्छ । परिवारले सही संस्कार दिन नसक्नुमा दोष अभिभावको नै हुन्छ । छिमेकीलाई धारे हात देखाउँदैमा आफ्ना सन्तानको गल्ती चोखिदैंन । यहाँनेर उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन एक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र हो । चीनसँग पैँठेजाेरी खोज्ने न त हाम्रो आर्थिक हैसियत छ न त नैतिक नै ! अर्थशास्त्रीहरुले गरेको प्रक्षेपण अनुसार चीन आगमी केही वर्षमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रधारी मुलुक बन्दै छ । नेपाल चीन सम्बन्धमा यस घटनाले कस्तो असर पार्ला ? चीनले नेपाललाई दिइरहेको आफ्नो सहयोग स्थगित गर्ला वा चालु सम्झौताहरु समेत रद्द गरिदेला वा युद्धकाे उद्घाेष गरिदेला ! जवाफ अब चीनीयाँ राजदूतावासले निकाल्ने विज्ञप्तिमा निर्भर गर्छ ।
सामान्यभन्दा ढिलै भएता पनि तेस्रो मूलुकले धमाधम आफ्ना नागरिकलाई घर बोलाईरहेको बेला चीनीयाँ नागरिकको बारे चासो नलिनु कत्तिको जायज हो ? नेपालले आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याएसँगै यहाँ रहेका चीनीयाँ नागरिक फिर्ता पठाउन पनि केही पहल गरेको भए बेस हुन्थ्यो । दूतावासमा पहल गरेर आफ्ना नागरिकबारे चासो लेउ भन्न नसक्नु कस्को गल्ती ? सरसर्ती हेर्दा यहाँनेर सरकारी कुटनीतिक भूमिका निकै नै फितलो साबित हुन्छ ।
आफूबाट भै सकेको गल्ती उल्टाउन त मिल्दैन तर नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो विज्ञप्ति निकालेर क्षमा माग्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।
अलिकति कुरा गरौं हाम्रो आफ्नै संस्कारको पनि । नेपाल प्रहरी आफूलाई जत्ति सुसज्जित र नागरिकमुखी देखाउने प्रयास गर्दछ । आन्तरिक रुपमा उत्ति नै कुरुप र घृणित छ । कारण हो आफ्नो धर्म अनुसारको सेवा प्रदान गर्न नसक्नु । यी शब्द पङ्तिकारको भएता पनि भावना आम जनमानसको हो । यसलाई पुष्टि गर्दछ सामाजिक सञ्जालनमा पोखिएका कुण्ठाहरुले । घटनाले उग्र रुप लिएसँगै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर र फेसबुकमा प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नेको संख्या २/३ देख्न सकिन्छ !
सरकारी तप्काबाट भै सकेको गल्ती उल्टाउन त मिल्दैन तर नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो विज्ञप्ति निकालेर क्षमा माग्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ । यस घटना, समाज र पदीय मर्यादा बुझ्न सक्ने शिक्षित व्यक्तिहरु मात्रै राष्ट्रसेवामा सहभागी हुन पाउने आधार तोकिनु हाम्रा निम्ति अर्को एक पाठ बन्नुपर्छ । त्यसो त घटनाबाट पाठ सिक्ने हाम्रो आदत बनिसकेको छैन । राज्यको पहिलो पङ्तिमा रहेकाहरुबाट नै न्याय र सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिएको समयमा तिनैका भाइ भारदारको संस्कारको अनुमान सामान्य बालकले पनि गर्न नसक्ला भन्न सकिन्न । असफलता नेपाल सरकारको नसा नसा बहेको छ । आफ्नो असफताले सरकार लज्जित बन्दैन नै तर उल्टै उर्जा प्राप्त गर्छ, र स्थापित गर्छ अर्को एकपटक असफल हुने नजीर ।
अन्त्यमा, सार्वजनिक रुपमा बोल्न र लेख्न नसकिएको भएता पनि नेपाली राजनीतिमा उत्तर दक्षिणको भूमिका अनिवार्य छ ! यहाँ हुने स्थानीय चुनावदेखि मन्त्रि परिषद बैठक कक्षसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्ने हैसियत शक्तिराष्ट्रसँगको यो पङ्गा नेपालीलाई निकै महङ्गो पर्ने निश्चित छ ।
उक्त लेखलाई सल्लेरी खबरमा पढ्न यहाँँ क्लिक गर्नुहोस् !
Let's haveafew words on humanity beyond anything.
सनातन सभ्यता संस्कार कि कु-संस्कार ?
Suzzan Adhikary Copyright © 2020. Site by Suman Khadka